DIYAARADO WARQADO DIGNINO AH KU DAADIYAY QEYBO KAMIDA LABADA SHABELLE – V O S
Published On: Wed, Jul 25th, 2018
Uncategorized | By Daacad for Somalia
DIYAARADO WARQADO DIGNINO AH KU DAADIYAY QEYBO KAMIDA LABADA SHABELLE
Diyaarado dagaal ayaa degaano ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose oo ay maamulaan xoogaga hubeysan ee alshabaab ayaa waxa ay maanta ku daadiyeen warqado digniin ah oo ku socota dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi.
Dadka qaarkood ayaana midkamida idaacadaha madaxa banaan u sheegay inay arkeen Diyaarado dagaal oo dul heehaabaya degaano labadan gobol ka kala tirsan.
Tuulooyinka ay Diyaaradahan dagaal warqadaha ku daadiyeen ayaa waxaa ka mid ah tuulada Basra oo dhawr iyo Toban KM dhinaca Galbeed ka xigta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dgemada Basra ayaa waxa ay waxa ay ka mid tahay goobaha ay maamulaan Ururka Al Shabaab, warqadaha ay Diyaaradahan daadiyeen ayaa waxa ay shacabka uga digayaan inay ka agdhawaadaan goobaha ay Shabaab ku sugan yihiin.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan degaanadan ayaa waxa ay sheegeen inay dareemayaan cabsi ku aadan in diyaaradahan ay duqeyn geystaan, xilli aanan laga warqabin.
Si arrintan aan wax badan uga ogaano waxaanu xiriir la sameynay masuuliyiinta Hirshabeelle, balse waxay ka jawaabi waayeen wicitaanadeena.
Daacad for Somalia -